Tallaabada lagu xiray xaruntan, ayaa waxaa loo aaneynayaa waraysi ay kaqaaday Guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan maalintii shalay, xilli uu tagay degmada Carmo gobolka Bari.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland oo maanta la hadlay Radio Daljir, ayaa ku hanjabay inuu dili doono saxaafiyiinti, wixii hadda ka dambeeyana adeegsan doono rasaas.
Hadalka iyo qoraalka Soocadde, waxaa maanta cambaareeyay saxafiyiinta ku sugan Garowe, iyagoo gaf iyo khalad ku tilmaamay in mas'uul dowladeed si bareer ah u sheego inuu ka tallaabsanayo sharciga.
Hanjabaada iyo xariggan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay wasiir Soocadde soo saaray amar oo ku joojinayo in waraysi laga qaado Guddoomiyihii hore gobolka Bari, kaasi oo ku tilmaamay Argagixiso xiriir la leh Burcad badeeda.
Tan iyo markii wasaaradda warfaafinta Puntland madaxweyne Gaas u dhiibay wasiir Soocadde, waxaa cirka isku shareeray khilaafka iyo isfahamwaaga kala dhaxeeya warbahinta, isagoo intii uu xafiiska joogay xiray Wariyaal, xarumo warbaahineed iyo hanjabaad ay ugu darnayd middi maanta kasoo yeertay.
Arrintan, ayaa meel ka dhac ku noqonaysa dastuurka iyo qaanuunka warbaahinta ee dalka u yaalla, kaasoo si cad u sheegay Soocade inuu ka tallaabsanayo islamarkaana uusan ku dhaqmayn.
GAROWE- Shacabka ku nool magaalo madaxda Puntland ee Garowe, ayaa si kulul uga hadlay caburtinta dowladdu ku hayso qaybaha saxaafada, gaara ahaan xayiraada Idaacada Daljir oo maalinkii 4-aad hawada ka maqan.
Shacabka oo aragtidooda lagu w ...
Puntland 23.06.2016. 12:53
Puntland: Agaasimaha Radio Garowe oo soo dhoweeyey in Daljir la fasaxo, baaqna direy
Puntland 05.07.2016. 02:18
Xafiiska Madaxweynaha Puntland oo fasaxey Radio Daljir
Puntland 04.07.2016. 17:15